एयर कीटाणुशोधन रोबोट - शंघाई FAUCI टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
FAUCI एयर कीटाणुशोधन रोबोट FAQ
यो कीटाणुरहित रोबोट कसरी काम गर्दछ?
उत्तर: रोबोट एक सपाट जमीन सतह र एक उपयुक्त आकार को क्षेत्र संग एक ठाउँ मा राख्न को लागी उपयुक्त छ। अपरेटि instructions निर्देशन अनुसार प्रासंगिक सेटिंग्स प्रदर्शन, र विभिन्न अपरेटिंग चरणहरु प्रदर्शन पछि, यो सामान्यतया प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यो कीटाणुरहित रोबोट कसरी कीटाणुरहित र शुद्ध गर्दछ?
उत्तर: यो रोबोट सक्रिय गैस कीटाणुशोधन र शुद्धिकरण कारक सक्रिय रूप मा जारी गर्न को लागी एक बाहिरी कीटाणुशोधन बैग को उपयोग गर्दछ, र सबै ठाउँ मा काम गर्दा, यो कीटाणुशोधन झोला को हावा प्रवाह को माध्यम बाट रोबोट को आसपास हावा मा शुद्ध गैसीय कीटाणुशोधन र शुद्धिकरण कारक फैलाउँछ। अवरोध र ब्याक्टेरिया वा भाइरस कुनै पनी हावा मा देखा पर्न सक्छ मा मार्न।
उत्तर: सेल भित्ताहरु, कोशिका झिल्लीहरु र ब्याक्टेरिया वा मोल्ड को प्रोटीन शरीरहरु, क्लोरीन डाइअक्साइड र ROS को अक्सिडेटिव विघटन द्वारा नष्ट गरिनेछ। भाइरसहरु गैर सेलुलर जीवहरु हुन् र कुनै सेल पर्खालहरु छैनन्, त्यसैले उनीहरु सजीलै विघटित र oxidative अपघटन द्वारा नष्ट गर्न सकिन्छ।
विशेष गरी, यो कीटाणुरहित रोबोट कोभिड -१ and र यसको भेरियन्ट मार्न सक्छ?
उत्तर: बजार मा समान उत्पादनहरु को विशाल बहुमत मुख्य रूप मा कीटाणुनाशक स्प्रे रोबोट हो, जो हाइपोक्लोरस एसिड वा क्लोरीन डाइअक्साइड समाधान हावा मा एरोसोल को रूप मा हावा मा भाइरस र ब्याक्टेरिया लाई मार्न स्प्रे गर्दछ। हाइपोक्लोरस एसिडले अप्रत्यक्ष रूपमा क्लोरीन ग्याँस उत्पादन गर्दछ, र क्लोरीन डाइअक्साइड समाधान को धुंध को स्थानीय एकाग्रता धेरै उच्च छ, जसले मानव शरीरलाई हानि पुर्‍याउँछ। यी धुवाँ कीटाणुनाशकहरुलाई मानिसहरुको उपस्थिति मा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। साथै, धुवाँ कीटाणुनाशकहरु मात्र हावा मा स्प्रे गरिन्छ, त्यसैले यो समान रूप बाट वितरित हुन बाट टाढा छ, वास्तविक कीटाणुशोधन र बाँझोपन दक्षता धेरै कम हुन को लागी।
FAUCI एयर कीटाणुशोधन रोबोट मा निर्मित FAUCI AAPG सामग्री बिस्तारै सुरक्षित र कुशल शुद्ध गैसियस क्लोरीन डाइअक्साइड अणुहरु र ROS सक्रिय अक्सिजन आयनहरु जारी गर्दछ। एक हात मा, यो सक्रिय रूप मा अवरोध र प्रत्यक्ष रूप मा रोकाउन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, जो हावा मा जीवाणुहरु लाई मार्दछ। यसबाहेक, धेरै कम सुरक्षित एकाग्रता मात्रा एक कुशल कीटाणुशोधन र शुद्धिकरण प्रभाव प्रस्तुत गर्न सक्छ, र एउटै कोठा मा मानिसहरुलाई कुनै हानि गर्दैन।
के यो एयर कीटाणुशोधन रोबोट को कीटाणुशोधन विधिहरु प्रयोग गर्न को लागी सुरक्षित छ?
उत्तर: यस उत्पादन को निर्मित FAUCI AAPG सामग्री को सतह मा उत्पादित ट्रेस स्तर आरओएस सक्रिय अक्सिजन मानव शरीर मा भाइरस र ब्याक्टेरिया लाई मार्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अविभाज्य पदार्थ को रूप मा उस्तै छ। यो पनि एक प्राकृतिक पदार्थ हो र ट्रेस दायरा भित्र छ। यो मानव शरीर को लागी लाभदायक र हानिकारक छ;
एकै समयमा, कीटाणुनाशक रोबोट अन्तर्निर्मित FAUCI AAPG सामग्री प्रासंगिक CMA/CNAS परीक्षण पारित गरेको छ: तीव्र इनहेलेशन विषाक्तता परीक्षण निष्कर्ष गैर विषाक्त देखाइएको छ; सेल माइक्रोन्यूक्लियस परीक्षण निष्कर्ष सबै नकारात्मक छ, जसको मतलब हो कि त्यहाँ कुनै सेल ऊतक उत्परिवर्तन र कुनै आनुवंशिक विषाक्तता छैन;
यो कीटाणुशोधन गर्ने रोबोटको हाल कुन परीक्षण र प्रमाणपत्र छ?
उत्तर: हाम्रा रोबोटहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मा सञ्जाल CNAS दर्ता प्रमाणीकरण निकाय को सान्दर्भिक निरीक्षण पारित गरेका छन्, र EU CE-ROHS प्रमाणीकरण, एफडीए प्रमाणीकरण, MSDS प्रमाणीकरण, तीव्र इनहेलेशन विषाक्तता परीक्षण रिपोर्ट, H1N1 भाइरस परीक्षण रिपोर्ट, Staphylococcus Albus परीक्षण रिपोर्ट, मानव प्राप्त Enterovirus 71 टेस्ट रिपोर्ट, Escherichia कोली परीक्षण रिपोर्ट।
कीटाणुनाशक रोबोट को उपयोग मा सावधानी के हो?
Henजब रोबोट पार्क गरीएको छ, यो धातु बस्तुहरु र कपडा बाट १ मिटर भन्दा बढी को दूरी राख्नु पर्छ;
यदि कीटाणुनाशक रोबोट लगातार घर भित्र काम गरीरहेको छ, एक मास्क अझै पनी आवश्यक छ?